Mapuroteni emhuka uye nharaunda, mubatanidzwa une njodzi | Green Renewables
Mapuroteni emhuka uye nharaunda, mubatanidzwa une njodzi
Fausto Ramirez | | Kurima kwezvakatipoteredza, Ecology
Kana paine chikafu chinozivikanwa nemhasuru, ndizvo chaizvo protein. Chokwadi, inhengo huru yemhasuru yemhasuru, iyo mipiro yayo inofanirwa kukwidziridzwa zuva nezuva kana munhu wacho achifarira zvemitambo, pavanenge vachida kudzikira huremu, kana kungochengeta hutano. Kurera huremu uye kujaira tsika kwe a basa fizikiki Chaizvoizvo ivo vanowedzera kuwedzera mune zvido zvedzidziso.
Kufunga uku ndekwemuviri uye ndiyo nyaya yeiyo huru recommendations zvinovaka muviri. Asi kana tikatarisa zvakati wandei pasi pese nezve chikamu chezvekudya, muchiyero chakabatana, mamiriro acho haasi nyore. Chokwadi, kuona iyo demographic shanduko uye maitiro azvino uno wehuwandu hwepasi rose kuwedzera mipiro yavo mumapuroteni emhuka, pakupedzisira inotanga kuumba dambudziko.
Kunyange i fungidziro zvinotitungamira kune vanopfuura mabhiriyoni mapfumbamwe e9,6 vagari vepasi pano na2050, kuchengetedzwa kwerudzi urwu rwekushandisa mumapuroteni emhuka zvechokwadi idambudziko rezvakatipoteredza. Pane chiyero chebatsiro, dzokorora kushandiswa kwe protein mhuka dzakakosha. Kugadzirwa kwezvipfuyo kunoitisa 70% yepasi inorimika, uye makumi mana muzana ezviyo zvinorimwa pasirese zvakagadzirirwa kufudza zvipfuyo zvinofambisa nyika idzi.
Ichi ndicho chimwe cheakakosha mapoinzi ekuvimbisa ichi chiri kukura kudiwa kwe protein mhuka. Izvo zvakakosha kuti uwedzere kugadzirwa kwezviyo kukuvadza ivhu rekubereka uye kuremekedza ecosystem. Mukupfupisa, nepo vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana vachitambura nenzara munyika, uye mabhiriyoni maviri kushomeka zvinovaka muviri, iyo yazvino system inokoshesa isina simba simba goho kupindura kune zvinowedzera zvido zvemapuroteni emhuka kukuvadza mhinduro dzepasirese, zvese zvinovaka muviri, zvakatipoteredza uye hupfumi.
Chokwadi, zvinoenderana nerudzi, iyo coste nesimba yeiyo inofungidzirwa mhuka koriori ingangoita 3 kusvika ku9 yemiriwo macalorie. Kana isu tikatora muenzaniso wenyuchi yakasimudzwa maindasitiri kwemakore matatu kupa 200 kilos ye nyama, iyi mombe ichadya 1300 kg yezviyo uye 7200 kg yefurawa. Paavhareji, makirogiramu manomwe ezviyo anodikanwa kuburitsa kirogiramu imwe yenyama mukurima zvipfuyo kwakasimba. Ndiani anoti kurima, anotiwo kunwa mvura.
La chinyorwa mvura Icho chinhu chaicho chekuyera, icho chinobvumidza kuyera mvura inodiwa pakugadzirwa kwechikafu mumatanho ese, akananga uye asina kunangana. Pakati pa1996 na2005, iko kunyorwa kwemvura kwevanhu kwaive kwakakura, 92% yeiyi yakatemerwa iyo agriculture and the kuchengeta mombe. Sekureva kweshumo rakaburitswa muna 2010 neUNESCO's HIE, kugadzirwa kwekirogiramu imwe yemombe kunoda marita zviuru gumi nezvishanu emvura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Mapuroteni emhuka uye nharaunda, mubatanidzwa une njodzi
Izvo zvitsva zvisingazivikanwe magetsi masosi
Akawanda uye akawanda makamba eFlorida ane mamota